नि: शुल्क अनलाइन QR कोड जनरेटर | QR कोड बनाउनुहोस्
नि: शुल्क QR कोड जनरेटर
QR कोड एक दुई आयामिक बार कोड हो जसमा निर्दिष्ट जानकारी हुन्छ, द्रुत पहुँचको लागि जुन मोबाईल फोनको क्यामेरा प्रयोग गरिन्छ।
उत्पन्न गरिएको QR कोडले जानकारी समावेश गर्न सक्दछ: एक वेबसाइट र सामाजिक नेटवर्कको लिंक, व्हाट्सएप र टेलिग्राम, ईमेल ठेगाना, एक फोन नम्बर, वाइफाइ नेटवर्क डाटा, कम्पनीको व्यवसाय कार्ड वा विशेष व्यक्तिको कार्ड। दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिएको कुनै पनि अन्य जानकारीहरू जस्तै। हाम्रो अनलाइन जेनरेटरले तपाईलाई क्यूआर कोड निःशुल्क बनाउनको लागि मद्दत गर्दछ, सरल र छिटो भन्दा छिटो।
QR कोड सिर्जना गर्नुहोस् »
लोगो डाउनलोड गर्नुहोस् वा उपलब्ध छनौट गर्नुहोस्
QR कोड रंग
गुण कम औसत उच्च उत्तम
QR कोड डिजाइन
वेबसाइट ठेगाना (URL)
लिंक गर्न Instagram
लिंक गर्न Facebook
लिंक गर्न Twitter
लिंक गर्न YouTube
लिंक गर्न Linkedin
लिंक गर्न Vkontakte
नाम भित्र Telegram
नेटवर्क प्रकार WEP WPA/WPA2 कुनै ईन्क्रिप्शन छैन
लिंक गर्न Ask
भुक्तानी प्रकार अहिले खरिद गर शपिंग कार्टमा थप्नुहोस् दान
E-mail भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि ईमेल ठेगाना
लिंक गर्न Google Play
लिंक गर्न App Stores
QR कोड उत्पन्न गर्नुहोस्
प्रतीक्षा. लोगो प्रदर्शन मा QR कोड केही समय लिन सक्छ ।
QR कोड सिर्जना गर्न सजिलो छ
केही सामान्य क्लिकहरूमा हाम्रो जेनरेटरको साथ QR कोडहरू सिर्जना गर्नुहोस्। एउटा डिजाइन छनौट गर्नुहोस्, क्यूआर कोड रंग योजनाहरू अनुकूलित गर्नुहोस्, कम्पनी लोगो थप्नुहोस्, प्रसारणका लागि आवश्यक डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र QR कोड उत्पन्न गर्नुहोस्। यसलाई उच्च रिजोलुसनमा डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई सफलतापूर्वक नयाँ ग्राहकहरू आकर्षित गर्न, बिक्री बढाउन वा QR कोड प्रयोग गरेर उपयोगी जानकारी साटासाट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। QR कोड सिर्जना नि: शुल्क हो र साइटमा दर्ता आवश्यक छैन।
उत्पन्न गरिएको QR कोड डाउनलोड गर्ने धेरै ढाँचामा उपलब्ध छन्: PNG, SVG र ESP उच्च रिजोलुसन, उच्च गुणस्तर र बिल्कुल सित्तैमा। तपाईंको आवश्यकता अनुसार डिजाइन अनुकूलित गर्नुहोस्, सबै भन्दा उपयुक्त QR कोड ढाँचा छनौट गर्नुहोस् र काम र मनोरन्जनमा थप प्रयोगको लागि गुणस्तरको क्षति बिना डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाइँको वेबसाइट को लागी QR कोड जेनरेटर
के तपाइँ तपाइँको वेबसाइटमा QR कोड जेनरेटर थप्न चाहानुहुन्छ वा पूर्ण विकसित QR कोड निर्माण सेवा बनाउन चाहानुहुन्छ? केवल तलको कोड प्रतिलिपि गर्नुहोस् साइटमा इच्छित स्थानमा। यो नि: शुल्क हो र कुनै प्रोग्रामिंग ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन। यो कोड थपे पछि, तपाईंको साइटको प्रत्येक प्रयोगकर्ताको नि: शुल्क अनलाइन QR कोड जेनेरेटरमा पहुँच हुनेछ।
<iframe src="https://free-qr.com/ne/generator.php" frameborder="0" scrolling="yes" width="100%" height="100%" loading = "lazy"></iframe>
कृपया हामीलाई सेवा अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्नुहोस्। कृपया हाम्रो ई-मेलमा अनुवादमा फेला परेका सबै त्रुटिहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्: [email protected].